Arsenal Oo Loo Sheegay Waqtiga Ay Ku Guuleysan Doonto Horyaalka Premier League - GOOL24.NET
Arsenal Oo Loo Sheegay Waqtiga Ay Ku Guuleysan Doonto Horyaalka Premier League
Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa laga farxiyey, waxaana loo sheegay in ay dhowaan dib ugu soo noqon doonto farxaddii iyo waqtiyadii koobabka, isla markaana ay kooxdoodu ku guuleysan doonto horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League.
Mikel Arteta ayay kooxdiisu xilli ciyaareedkan ku dagaallamaysaa kaalinta afraad, waxaanay hal dhibic ka horreysaa Tottenham oo shanaad fadhida iyadoo dhamaadka xilli ciyaareedkana ay laba kulan oo kali ahi ka hadhsan yihiin.
Gunners waxay 23 dhibcood ka dambaysaa kooxda hoggaanka horyaalka haysa ee Manchester City waxaanay taasi ka dhigan tahay inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya kaalinta koowaad iyo xataa ku guuleysiga Champions League.
Sidaas oo ay tahay, difaacii hore ee xulka France iyo Arsenal ee Bacary Sagna ayaa rumaysan, in laba sannadood oo kaliya ay ku qaadan doonto kooxda reer London in ay soo gaadho Man City oo 23 dhibcood ka horreysa iyo Liverpool oo 20 dhibcood ka horreysa, kaddibna ay kula dagaallami doonto ku guuleysiga horyaalka.
“Walwal ayaa iga hayay sida ay Arsenal xilli ciyaareedkan u dheelayso, laakiin waxay ii caddeeyeen in aan qaldanaa.” Ayuu yidhi Bacary Sagna oo u warramay wargeyska The Sun.
Waxa uu intaa kusii daray: “Waxa jira nidaam cad oo ay kooxdu ku socoto, taageereyaashuna waxay u baahan yihiin in ay ku kalsoonaadaan oo ay samir muujiyaan.
“Xilli-ciyaareedka dambe xisaabta kuma jiraan, laakiin waxa aan hubaa in laba sannadood gudahood ay ku noqon doonaan kooxda ugu sarraysa oo ay ku guuleysan doonaan horyaalka Premier League.”
Barcary Sagna ayaa Manchester City u ciyaaray muddadii u dhaxaysay 2007 illaa 2014, waxaana uu u saftay 284 ciyaarood ka hor intii aanu uga wareegin Manchester City